OLOLIHII IS MUUJINTA EE WASIIR KHAARAJIGA SOMALILAND: Is-burburin mise Is Muujin? Qalinkii Maxamed Haaruun Biixi | Awdalpress.com	Qoraalo | Tacliiq Raaci | E-mail / Home
OLOLIHII IS MUUJINTA EE WASIIR KHAARAJIGA SOMALILAND: Is-burburin mise Is Muujin? Qalinkii Maxamed Haaruun Biixi
Waxa Daabacay staff-reporter on Jan 24th, 2013 and filed under Daily Somali News.
Both comments and pings are currently closed.	(Akhristayaal waxan idinla wadaagayaa qoraalkan falanqaynta ah oo Wargayska Geeska Africa ilaa Sabtidii, 17 January ku soo baxaayay isagoo qaybo ah) Somaliland waa ambad. Ambad qudha maaha ee, waa ambad aan is ogayn! Inay Somaliland ambad tahay astaamo tilmaamaya ayaa jira, kuwaasina waxa koow ka ah Wasiir Maxamed C/laahi Cumar (Digtoorka) iyo sida uu taladii ummadda ula ambaday, ee walina loogu eegaayo isaga oo hadba gidaar kala soo go’aya. Qaladaadka Digtoorka kuwii ugu dambeeyay baan faaqidayaa, hortiinana soo tubayaa ee idina marag iiga noqda.
“Hadda ayuu sii go’ay.” Ayaa laga hayaa niman uu bari mayd ay tunka ku wadeen ka siibtay oo dhulka uga dhacay! Reer-miyigeenna geela raacdaa-na waxa ay ku maahmaahan, “Geeloow soco, oo soco, maalinta aad ciin daaqdid uun baa se laguu yaabaa.” In yar ila soco waan hubaa inaad iiga garaabi soo qaadashada murtidane.
Digtoorkii Somaliland ee amuuraha Debeddu, sidii caadada u ahayd, wuxu dhawr maalmood hortood ka soo laabtay mid ka mid ah safaraddiisa tirada badan, ee haddana tayada iyo tamarta daran oo markan ilaa UK uu ku gaadhay. Haddadan aan qoraalkan samaynaayey waxa I soo gaadhay inuu Dubai (UAE) u baqoolay isagoo sheegtay inuu hawl-qaran u baxay oo Marsada Berberra sidii loo balaadhin lahaa waddankaas kala soo hadlaayo. Intaas oo dhab ah baan jeclaan lahaa! Waxad ba mararka qaarkood is odhanaysaa malaha ninkaniba ‘saar’ diyaarad raacis ah baa haya oo, si uu isaga cuudiyo uu siyaasaddaba u soo galay! Haddaanay sidaas ahayn, maxaynu kol uun wax la garto uga maqli waynay.
Intii uu xilka hayay kun iyo koow jeer buu baxay, oo haddana soo noqday sidii jiir mus galay, wax ka badan “Meeqaam sare ayaa la igu qaabilay…” iyo “Casho/qado sharaf baan hebel ama heblaayo la qaatay…” iyo “Sumcadeennu kor bay u kacday…” miyaa laga maqlay? Ma sidaas baa qaran lagu dhaqaa? Hadii muggaaguba noqdo maalin lagu casuumo, muraad ummadeedna tunkaaga saaranyahay saw nasiib darro ma aha? Waatan maanta taagan, sida uu wiilkaasi talo ummad dhan ula ambaday baanan idiin dildilaacin ee ila wadaaga.
“Mayd midkee u dambeeyay, iyo kan la sii sido baa la odhan jiray ee aan nasiib daradda halkii ugu dambaysay raadkeeda ka bilaabo. Digtoorku intii uu usbuucii tegey UK booqashada ku joogay, wuxu aad uga hadlay TV yada Soomaalidu daawato, gaar ahaan Somali Channel TV, Horn Cable TV iyo Somaliland TV oo usbuucii koowaad ee bishan January, 2013 aad looga fiirsaday caalamka. Awal wuxu ku roonaa ceebtiisa ayuu ogaa, waxaanu si wayn uga digtoonaan jiray inuu warbaahinta hor yimaado. Si ay ka noqotayba, maanta ceebtiisii buu ilaaway, waanu is aasay. Wuu hadlay, oo hadlay, kalmad kasta oo uu sheegayna shakhsiyadiisa ayay si foolxun u qaawinaysay, isla markaana, waxay kashifaysay sida uu sabool uga yahay aqoonta ku saabsan shaqada uu sheeganaayo inuu hayo. Qof kasta oo barnaamijyadaas daawaday, ama daawan doonaa (Dhamaadka qoraalkan ka gal youtube videos ka), oo maan fayaw ku dhugta waxa uu ninkaasi ku hadlaayo, waxan hubaa inuu si buuxda u dareemi doono waxa aan tilmaamaayo. Awalba wuu iska aamusnaa ee bal maxaa ka hadliyay? Bixiso uun iga dheh.
Bal ila dhadhami qaladaadka meeshan is dul tuulan, ee xataa wiil adhi-jir ahi aanu gali Karin, ee ninkani (Digtoorku) uu dhex dabaalanaayo isagoo waliba sidaas PH.D culuumta siyaasadda ah ku sheeganaaya in uu ku sito. Sida aad qoraalkan kaga bogan doontid, meelaha qaarkood ‘Digtoorku’ isaga ayaaba is burinaaya oo waan tilmaami doonaa, meelaha qaarkoodna, xaqiiqada ayuu si badheedh ah isaga baal marayaa, taasna waan tilmaami, qaybta sadexaadna, waxay muujinaysaa aqoon darro ka haysata waxyaabaha uu ka hadlaayo, iyadana waan tilmaami.
Al-muhim, waxan soo ban dhigi dood qayaxan, oo ay tahay inuu wax ka yidhaaho, haddii kalena, uu xilka iska casilo. Dabcan waa haddii ay inyar oo damiir ahi ku laabantahay. Kolkaan sidaas leeyahay, waan ka dheregsanahay in xilliyo kala duwan, dad kala duwan, oo qaarkood ayba Digtoorka la shaqeeyeen ay qaladaadkiisa oo faahfaahsan, oo qaranka iyo xukuumadda maanta jirtaba dhabar-jab ku ah uga hadleen, laakiin aanay cidina ka hoos qaadin. Xukuumadda Madaxwayne Silaanyo ceebaheeda waxa ka mid ah inaanay dhaliilaha korkeeda ku yaala daawayn iyo deedifayn midnaba kula dhaqaaqin ee ay sabab la’aan isaga dugsato. Haddaad aragtid ama maqashid nidaam iska huursanaaya wixii in la hufo u baahan, nidaamkaas, iyo ummadda uu matalaayoba, mustaqbal wacani kama horreeyo
Sidee waraysiyadu ku yimaadeen:
Sidii dhaqanka u ahayd, ‘Digtoor’ Maxamed usbuucii koobaad ee bishan January 2013 ayuunbaa laga war helay inuu London joogo. Isla bisha saddexdeedii, waxa shir laba geesood ah Xafiiska Arimaha Debedda ee Ingiriiska ku lahaa Wasiirada Debedda ee UK iyo Soomaaliya (William Hague iyo Foosiya Yuusuf), wariyayaashii maalintaas u tagay inay masuuliyiintaas waraystaan ayaana ‘Digtoorka’ si lama filaan ah ugu arkay isagoo jooga Xafiiskii Amuuraha Debedda ee Wasiiradu ay shirka ku lahaayeen. Siday ii sheegeen isla maalintaas wariyayaashii soo arkay, Digtoorku wuu ka fakaday oo hadal lamay gaadhin isaga. Kolkii uu ogaaday in la arkay, kadib ayaanu bilaabay inuu TV yada fadhigoodu London yahay badankooda la xidhiidho, si uu warkiisa u galiyo, sidaas baanay waraysiyadu ku yimaadeen.
Sidee haddaba wax u dhaceen. Bal ila dhugo:
Akhriste, warkii tirada badnaa ee Digtoorka Somaliland ee Arimaha Debeddu sii daayay idiin wada geli maayo, oo waad ku daalaysaan, laakiin meelaha ma-dhaafaanka ah ee qaladaadka taariikhiga ahi ku jiraan baan taaban. Bilawgiiba, wuxu ololihiisa is muujinta ah ka bilaabay TV ga Somali Channel la yidhaaho, waxaana waraystay Xassan-cadde. Muxuu Xassan waydiiyey, maxaa se ugu darnaa? Bilawgiiba, wariyuhu wuxu su’aalay sababta safarkiisa UK keentay. Wasiirku wuxu taas ku sheegay inay ahayd booqasho isaga gaar u ah, carrabka ayaanu ku adkeeyay. Isla kolkiiba laakiin wuu ka daba tagay warkaas hore, waxanu sheegay inay booqashadii gaarka ahayd shaqo isu rogtay, oo durbadiiba ay xidhiidho u bilaabmeen isaga iyo Wasaaradda Khaarajiga ee Ingiriiska, uuna la kulmay Mark Simmonds oo ah qofka Wasaaraddaas u qaabilsan arimaha Africa. Bal u fiirso, booqashadii gaarka ahayd, iyo kulammada noocaas oo kale ah! Sida ku tala gal la’aan loola kulmo madaxda Wasaaradda Khaarajiga iyo Wasaaradaha kaleba way adagtahay. Warkaas Digtorkana micnaha ku jiraa wuxu yahay, inaanay booqashadiisa UK ahayn mid gaar ah sida uu sheegay, wixii kulamo ah ee uu la yeeshayna kuwo horey loo sii qorsheeyay ay ahaayeen. Dawladda Ingiriisku haddii ayna ogaynba inuu waddanka joogo wax xidhiidh ah lama samayn karto, qof masuul ah, oo kulammada uu galaayo labadii biloodba mar la sii diyaariyona ‘Digtoor’ Maxamed oo iska soo galay iskama heli karo. Halkaas runtii way maqantahay ee ii qabo.
Ka gudub. Somali Channel waxa kale oo ay su’aashay: wax xidhiidho ah inay la yeesheen Madaxwaynaha Soomaaliya ee dhawaan la doortay. Digtoor Maxamed taas wuu deedifeeyay, waxaanu sheegay inaanu wax xidhiidh ahi kolnaba dhex marin; marka laga reebo tahniyadii ay doorashadiisii September 2012 u direen kadib. Hawraarsan! Warysigii baa sii socday, Wariye Xassan baa haddana si kale ugu dhigay, waxaanu Wasiirka waydiiyay inay Madaxwayne Xassan kula kulmeen shirkii Djibouti ee Af-Soomaaliga ee dhawaan qabsoomay iyo in kale. Wasiirkeenu wuxu sheegay inay labada madaxwayne kulmeen, is barteen, arimaha amniga ee mandiqadda ka wada hadleen, iyo waliba, sidii loo amba qaadi lahaa wada hadalkii labada dhinac. Wuxu intaas ku daray, inay labada madaxwayne intaas uun ka hadleen ee aanay siyaasad kale galin! Waa yaabe hadaanay intaasi siyaasad ahayn, maxaa siyaasad ah? Taloow muxuu siyaasadda u yaqaanaa? Waxa taasba ka daran, hadalkiisii dhawr daqiiqo ka hor, ee ahaa wax xidhiidh ahi nama dhex marin buu dib u masaxay!
Warysiga oo sii socday, waxa la su’aalay xidhiidhka Turkiga ay la leeyihiin, iyo guud ahaanba, halka ay marayso arintii ‘ictiraafka’ ee Somaliland. Wasiirku kolkuu arimahaas ka hadlaayay, wuxu si xishood la’aan ah u sheegay been qayaxan! Digtoorku wuxu yidhi, Xidhiidkha Turkigu meel wacan buu marayaa, intii aanu tagnay shirkii Soomaalida ee bishii May 2012 na aad buu xidhiidhkayagu u wacan yahay. Arinta ‘ictiraafka’ wuxu ka yidhi, “Waxan idiinku bushaaraynayaa inay haatan waddammo badan oo Africa ah, gaar ahaan wadamada Barriga Afrika diyaar u yihiin inay arintaas inagala shaqeeyaan, meel wacanna ay arintu marayso! Cajiib: “ilayn af aan kugu oolin ma qabatid!” Baa nin laga sheegay. Midda ku saabsan shirka Turkiga, anigu waxan qoraal ku hayaa xogtii ay bixiyeen Wasiirradii isaga la socday, qaarkoodna waaban la kulmay.
Shirkaasi waxaan fadeexad iyo foolxumo ahayni kama dhicin, laakiin isaga (Digtoorka) qurux bay la tahay. Wasiirradii la socday waxa ay sheegeen, inaanay xataa haynin hab-socodka shirka iyo qorshihiisu wuxu yahay toona. Waxay sheegeen inay moodayeen inuu isagu (Digtoorku) xog hayo oo wax ogyahay, laakiin markii ay Turki gaadheen ay xaqiiqadu u caddaatay. Awal hore wuxu odhan jiray, “Si meeqaam saraysa ayaa naloo qaabilay, meel gooni ah oo Soomaalida ka soocanna waa nala fadhiisiyay…” Laakiin shirka Turkiga ee uu sheegaayo xataa intaasi ma dhicin! Shirka Turkiga ceebta ugu wayn ee ka qabsatay waxa ay ahayd inuu isagu macno la’aan ku diiday ka qayb galkiisa, haddana, iyadoo shirkaba laba maalmood ka hadhay, uu macno la’aan ku ogolaaday, macno la’aan na ku tagay.
Arrinta ku saabsan ‘ictiraafka’ uu sheegaayona, waxa uu ka sheegay oo dhammi waa hal bacaad lagu lisay! Waddamada Afrikaanka ah ee diyaarka u ah inay ‘ictiraafka’ Somaliland ka hawl galaan waa kuwee? Hawsha ay arintaas u galayaan waa mid noocee ah? Yaa hawsha u dirtay? Wadamada Afrikadda Bari ee uu sheegayaa miyaanay Djibouti, Ethiopia, Eretria, Sudan, Uganda iyo Kenya ahayn? Ma kuwaas qaar aan ahayn ayuu sheegayaa? Ictiraafka uu leeyahay way ka hawl galayaan, waligiisba miyuu waydiistay? Miyuu qorshe ictiraaf keeni karaba leeyahay? Jawaabtu waa maya. Hadii aanay ahayn, bal isagu ha sheego. Waxan is waydiiyaa – ma isagaa waalan, ma dadka dirtay ee wax ka sugaaya ayaa waalan, mise wuxuba way isla waalanyihiin? Bal adba!
Isla maalintii warysiga Somali Channel la daawaday, maantii xigtay ayuu haddana soo fadhiistay Horn Cable TV, haddana, TV ga Somaliland buu soo fadhiistay. Wax isku mid ah buu dareeriyay, waxaanu gole keenay dood aan lugoba ku taagnayn oo iskeed isaga kufaysa, waanay kuftayba. Intiinii daawatay wayba aragtay, inta kalena way arki doontaa, (Kuma darin dadka badan ee muuqiisa iyo magaciisaba ka niyad jabay), aan soo qaadano dhawr qodob oo halistooda leh. Wariyaha HCTV (C/xaafid) wuxu wax ka su’aalay Xafiiska Qusuliyadda ah ee Ingiriisku uu dhawaan Hargeysa ka furtay oo uu Digtoorku ku faanay. Wariyuhu wuxu ku yidhi, Wasiir Xafiiskaasi miyaanu hoos imanaynin Safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho la gayn doono? Digtoorku taas wuxu kaga jawaabay “Maya”, Xafiiska Hargeysa, iyo xafiiska Muqdisho isma hoos tagayaan. Midkood (waa ka muqdishee) waxa laga maamulayaa Nairobi, kan Hargeysana, waxa laga maamulayaa Addis Ababa. Sidaas buu ku dooday, laakiin qalad wayn baa meeshaas ku jira ee bal u fiirso.
Marka hore, Ingiriisku Muqdisho xafiiska ay ku yeelan doonaan Nairobi lagama maamulaayo ee waa safaarad buuxda oo la mid ah midda Nairobi. Waxa ay sugayaan inta dhismaha safaaradda ee Muqdisho oo William Hague uu kal hore soo dhagax-dhigay uu dhammaanayo, ee amniguna sii hagaagayo oo kaliya. Safiirka loo magacaabay (Ambassador Matt Baugh) ee haatan Nairobi sugaha ku ahina halkaas buu u wareegayaa. Midda labaad, haddii Safaaraddooda Muqdisho hawl gasho, xafiiskooda Hargeysa lagama maamuli doono dhankaas iyo Addis Ababa sida uu Digtoorkeenu ku dooday ee waxa laga maamulayaa Muqdisho. 13kii April ee 2012, oo aan ka qayb galay shir ka dhacay Xafiiska Khaarajiga (FCO) ee UK, waxan aniga qudhaydu si khaas ah u soo qaaday arinta xafiiskaas Ingiriis ee Hargeysa oo xiligaas la hadal hayay uun, awoodiisu intay leekaan doonto, iyo halka laga maamuli doonoba. Si cadaan ah wuxu u sheegay masuulkii Khaarajiyadda Ingiriiska matalaayay ee shirkaas nagala qayb galay, in Xafiiska Hargeysa uu yahay Qusuliyad, lagana maamuli doono Safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho. Wuxu si cad u deedifeeyay suurtagalnimada Xafiiska Hargeysa ee UK in laga maamuli doono dhinacaas iyo Addis Ababa oo masuul Somaliland ahi maalintaasba uu soo qaaday. Waa laba mid uun, in Wasiirku uu arintaas ogyahay, ee uu doortay inuu ka been-sheego waxa socda, iyo inaanu ogaynba, oo taasina ay kaba sii darantahay. Labadaas ha kala doorto.
Geesta kale, mar la su’aalay arinta ‘aqoonsiga’ wuxu yidhi: “Aqoonsigu laba sababood buu ku yimaadaa, midi waa inay ururadda caalamiga ah sida UN ta oo kale mawqif ka qaataan aqoonsiga wadan, marna, waa inay wadamada xubnaha ka ah UN tu iskood u ogolaadaan ama diidaan aqoonsiga wadan…” Halkaas waxa ku jira qalad way nee bal ha loo fiirsado.
Bal hadda akhriste u fiirso: Qaramada Midoobay (UN) waxba ma aqoonsato haba yaraatee, wax mawqif ahna kama qaadan karto aqoonsiga waddan. UN ta wadankii shuruudaha xubinimadeeda buuxiya ayuunbaa ka mid noqda oo kursi ku yeesha, laakiin iyadu aqoonsi ma bixiso. Bal hal wadan oo UN tu aqoonsi siisay ha la soo helo. Hadii wadan uu laba kala noqonaayo, qaybta cusub ee aqoonsiga doonaysaa waa inay si sax ah u kala baxaan cidii ay wax wada lahaayeen (Eretria iyo South Sudan xasuuso), UN tuna si toos ah bay kursigooda xubinimada u siinayaan. Hadii aanay taasi dhicin, oo labadii dhinac ee kala tagaayay aanay kala bixista isla ogolaanin na, waa in seddex-meelood laba ka mid ah wadamada UN ta xubnaha ka ahi (in ka badan 120 wadan) ay wadanka cusub ee aqoonsi doonka ah soo aqoonsadaan. Kolka liiska wadamada aqoonsani ay intaas gaadho ee aanu hal wadan ka dhinayn oo kaliya ayuu wadankii cusbaa kursigiisa UN ta heli karaa. Inta ka horaysa maya, waana sababta hor taagan wadanka yar ee Kosovo la yidhaaho. Wadankaas waxa aqoonsan 67 wadan oo ay Ingiriiska iyo Maraykan kuba ku jiraan, hadana UN ta kursi kuma laha. Xataa kursi UN ta ugama keeni karaan wadamada aqoonsan oo ay hormuud u yihiin kuwa siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka ee manta hogaamiya. Xaqiiqadaas Digtoorka PH.D ga sheeganaaya ee Somaliland ma oga, sababtoo ah dee TV ga kama yidhaaheen wixii uu yidhi hadii uu sidaas u ogaan lahaa.
Ugu dambayntii, qoraalka maanta qodobka aan ku soo xidhayaa, (qoraaladu way inoo sii socon) wuxu yahay su’aal muhiim ahayd oo uu uu Wariye C/laahi (SLTV, madasha qurbejooga) hor dhigay Digtoorka. Su’aashu waxay ahayd, shirka May 2013, ee London lagu qaban doono ma ka soo qayb galaysaan? Sidii uu u rafanjiray awalba ayuu taasna ugu raftay, waanu awoodi waayay inuu haa iyo maya midkoodna yidhaaho. Wuxu xasuustay shirarkii hore (London, February 2012, iyo Istambul, June 2012) oo labadaba sheegay inaanu imanaynin, kadibna tagay. Waa siyaasad aan qorshe cayiman oo la raaco iyo mabda toona ku dhisnayn, waa siyaasad aan run ku dhisnayn, intaas oo dhan kadibna, waa siyaasad wiilkaas kolba meel isaga dhoofaaya, ee is burinaaya midig iyo bidix, horey iyo dib toona u dhaafsiisnayn. Jawaabaha uu bixinaayo iyo waxa uu ku hadlaayo wuxu ku sameeyaa hadba goobta ay ku qabsato, wax uga horeeyay, iyo wax uga dambeeyaana ma jiraan haba yaraatee. Eesh calaa Digtoor. Siyaasadda amuuraha debedu aqoon bay rabtaa, oo daacadnimo ayay rabtaa, PH.D aan si gaar ah xaalkeeda u ogahay, oon magac ahaan wax uga hooseeyaa jirin laguma wadi karo. Xoog-xoog iyo khasab ku riixis laguma wadi karo, hadii lagu wadona, way jabaysaa, khasaarhaana dhamaanteen baa wada leh.
Gunaanadkii, hadii sidaas xaal yahay, oo hal waraysi oo uu bixiyay uu sidaas isaga hor iyo daba imanaayo, oo xaalkiisu sii dhoof iyo soo dhoof uun ka bixi waayo, oo baarlamaan la xisaabtama, iyo warbaahin adag oo soo gole joojisaa aanay jirin, oo isna wixii afkiisa ku soo dacaba uu iskaga hadlo, oo ay ku jirto hadalkii uu bishii March, 2012 Hargeysa ka jeedshay ee uu ku sheegay inaanay Wasaaraddiisu qorshe shaqo oo la raaco u baahnaynba, side xaal noqonayaa? Meeshaas aqoon-darro baaxad leh baa ku jirta, laakiin waxa is waydiin ta lihi waxa weeye: Ilaa hadma ayuu Digtoor Maxamed danta umadda, ee aanu garanaynin ba sidaas foosha xun ku sii wadayaa?
Qalinkii: Maxamed Haaruun – mbiixi@gmail.com
1. Waraysiga Somali Channel – Maxamed C/laahi Cumar:
2. Waraysiga Somaliland TV – Maxamed C/laahi Cumar
3. Waraysiga HCTV – Maxamed C/laahi Cumar
This post has been viewed 551 times.
OpinionKaaf iyo kaladheeri: Dhalinyarada Reer Awdal, Oday-dhaqameedyada iyo Xuskii Maamul-beeleedka SNM May 20, 2013Somaliland ma ku filantahay Reer Somaliland ? Mise waxay ku filan tahay beel ? May 3, 2013“How does a particular belief affect a person’s life?” April 30, 2013Where she-goats wear bras April 2, 2013Somaliland Way Dhaqaaqday ! Dhankayse u Dhaqaaqday ? April 1, 2013Gabay ka hadlaya Abaaraha ka dhacay galbeedka Awdal iyo sida daran ee uu ay u saamaysay…laakiin aanay cidi dayeyn. March 26, 2013Siilaanyo will bring new Survival formula March 22, 2013Somaliland Shirka London miyay ka Diday Mise Way Diiday ! Faallo Hashim Goth March 21, 2013Somaliland iyo Puntland ma waxa ay xaasid ku yihiin In Somaliya hubka laga qaado? mise waxa ay doonayaan in aanay Somaliya dawlad awood lihi ka dhalan. Oo ay ku noolaadaan cabsida Alshabaab? March 8, 2013Wariye Haashim Sh.Omer Goth waa ruug caddaa saxafi ah oo aan hoos ugu soo noqon wax ma garatada qabiilka hoose naafeeyey. February 28, 2013	Somali-NewsThe UN and 250000 dead Somalis - MuslimVillage.com May 21, 2013Somaliland: “We need to be Prepared to Thwart new Threats from Somalia ... - Somaliland Sun May 20, 2013Somalia President Addresses Somaliland Separatism, Jubaland Formation - AllAfrica.com May 20, 2013Somaliland Minister Rejects Control of Airspace By Somalia Govt - AllAfrica.com May 15, 2013Negotiating Peace in Somalia: Somaliland's Perspective - Think Africa Press May 13, 2013Contrasting Somalia and Somaliland - Somalilandsun - Somaliland Sun May 11, 2013London's Somalia conference does not recognise Somaliland – we cannot go - The Guardian May 7, 2013Somalia: Controversy Over Dismissal of Motion On Somalia-Somaliland ... - AllAfrica.com April 28, 2013Somaliland - Advancing Security in a Fragile Region - AllAfrica.com April 24, 2013Parliament to debate about the Somalia and Somaliland Talks - Mareeg - Mareeg April 23, 2013	Daily Somali News